Kitra – Barea sy Etiopia: mety tsy ho afaka hilalao i Romain Metanire | NewsMada
Mety hanana olana ny Barea de Madagascar eo amin’ny fiatrehana ny fihaonana amin’i Etiopia, eo amin’ny fifanintsanana ny “Can 2022”. Mbola baraingo mantsy ny ho fiavian’i Romain Metanire.
Tsy mbola fantatra na ho anisan’ireo ho avy hiatrika ny lalao hikatrohan’ny Barea de Madagascar, amin’i Etiopia, eo amin’ny fifanintsanana hiadian-toerana amin’ny «Can 2022», hotanterahina any Addis-Abeba i Romain Metanire. Araka ny vaovao, navoakan’ny gazety tany Etazonia mantsy, manomana ny taom-pilalaovana 2021 amin’izao fotoana izao ny ankamaroan’ireo ekipa miatrika ny fiadiana ny ho tompondaka na ny Major League Soccer (MLS).
Misy ny fifaninanana mialoha ny tena fihaonana ofisialy, na ny «Pré-saison», atrehin’ny Minnesota United, klioba ilalaovan’ilay Malagasy, i Romain Metanire. Feno tanteraka ny fandaharam-potoanan’ny Minnesota United, ary mifanakaiky amin’ny fotoana hanatanterahan’ny Barea de Madagascar ny lalaony.
Manana lalao firahalahiana efatra ry Metanire, manomboa ny 27 marsa ho avy izao dia ny fikatrohany amin’ny Charleston Battery. Hifandona indray amin’ny Columbus Crew ry zalahy, ny 31 marsa ary amin’ny FC Cincinnati, ny 3 avrily. Hamarana izany ny lalao amin’ny Orlando City SC, ny 9 aprily, ho avy izao. Tsiahivina fa hanomboka ny 17 avrily 2021 ny taom-pilalaovana ho an’ny MLS.
Raha izao fandaharam-potoanan’ny Minnesota United izao, tsy ho afaka amin’ireo lalao roa hatrehin’ny Barea de Madagascar i Romain Metanire, izay tena andrin’ny fiarovantenan’ny Barea. Raha tsiahivina, hanafika an’i Etiopia, ny 24 marsa ary handray an’i Niger, ny 30 marsa, ho avy izao ny Barea.